Hapana Kupaka | Martech Zone
Wednesday, May 2, 2007 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Hapana chinhu chakafanana nekuenda kubasa uye kuenda kugaraji raunoripira uye hapana yekupaka yakasara! Paive nemusangano mudhorobha nhasi saka garaji rakanganisa ndokutengesa nzvimbo dzese. Saka vese vanogara vachibhadhara VANOFANIRA kubhadhara kune imwe garaji kana kusvina mune imwe nzvimbo.
Ini ndakasarudza kuve nehunyanzvi hwekugadzira nebasa rangu rekupaka - ini ndakamisa yakanangana pamberi pesuwo repasi pechitanhatu! Kana ndikaswededzwa ndiri kuzofuridza muvharo wangu. Ini ndaida kutanga mangwanani ano kuti ndiite ongororo yechigadzirwa uye ndashandisa 6 maminetsi kuyedza kupaka! Wandaishanda naye uye shamwari Emily vakafunga kuti zvainakidza zvekuti vakatora pfuti yake yekamera:
Izvo zvakashata zvakashata sevatengi kunetswa nevatengi vako vanobhadhara panzvimbo yeimwe-nguva!
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Ini handina kudhonzwa, asi mumwe munhu akandisiira tsamba yakanaka pafafitera remhepo yangu yandakasekerwa nayo, "IYI HAIYO POTI YOKUPAKA, BENZI!"